ဂျပန်နိုင်ငံ၏သင်္ချိုင်းစနစ် ပြိုလဲဖို့ အန္တရာယ်ရှိနေပြီလား? - JAPO Japanese News
ကြာ 05 Nov 2020, 17:07 ညနေ
နောက်ဆုံးတွင်လူသားအားလုံးသေကြလိမ့်မယ်ဆိုသိပါတယ်။ သို့သော်ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ သေဖို့ပြင်ဆင်ခြင်းအတွက်ကိုပင် ခက်ခဲတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အရမ်းစိတ်ဖိစီးမှုများတယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဘယ်သူအမွေခံရမှာလဲ။အမွေအနှစ်အခွန်ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်နိုင်အောင်မည်သို့လုပ်နိုင်မလဲ စသဖြင့်အမျိုးမျိုးသော စိတ်ဖိဆီးမှုများနှင့် အသုဘလုပ်ဖို့အတွက်လည်းအလွန်ခက်ခဲပါတယ်။တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာဘယ်လောက်ကုန်ကျတယ်ဆိုတာ ပျှမ်းမျှကိုကြည့်ကြရအောင်။
အမေရိကတွင် ဒေါ်လာ ၇,၃၆၀ ကုန်ကျပြီး ဂျပန် ယန်းငွေ ၈၀၀၀၀၀ အောက်သာရှိပါတယ်။UK မှာတော့ ပေါင် ၅၈၈၀ ရှိပြီး ဂျပန်ယန်းငွေ ၈၆၀,၀၀၀ ခန့်ရှိပါတယ်။ဒါဆိုရင် စျေးကြီးတယ်လို့ကောလာဟလသတင်းများထွက်နေတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကော?ပျမ်းမျှယန်း ၁.၉ မှ ၂.၂ သန်းကုန်ကျပါတယ်။
အသုဘသို့လာသူများအတွက် အစားအစာများလိုအပ်သည်ကို နားလည်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် Kaimyo ဟုခေါ်သည့်စနစ်ကတော့ လက်ရှိခေတ်နှင့်အနည်းငယ်ကွာခြားပါတယ်။ဗုဒ္ဓ ၀ါဒတွင် (နိစ်ရက်ဂိုဏ်းမှ လွဲ၍) ဗုဒ္ဓဘာသာလမ်းကြောင်းသို့သွားသောအခါ၊ သင်သည်ဤကမ္ဘာနှင့်မတူသောအမည်ဖြင့်ပြန်လည်မွေးဖွားလာမည်ဟူသောစည်းမျဉ်းရှိပါတယ်။ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဟာ ဘုန်းကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါ နာမည်တစ်ခုရတယ်။သို့သော်သာမန်လူများအသက်ရှင်နေစဉ်အတွင်းမှာ သူတို့က သာသနာ့ဘောင်ထဲသို့မဝင်ဖြစ်သောကြောင့် ထွက်သွားသည့်အခါဤလမ်းသို့ဝင်ကြပါတယ်။
အဲဒီအတွက် ပညတ်တော်ရဲ့နာမည်ကိုရယူတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါလှပတဲ့ဇာတ်လမ်းပဲဆိုပေမယ့်အဲဒီမှာယန်း ၃၀၀,၀၀၀ ကနေ ၅၀၀,၀၀၀ ကုန်ကျတယ်။သင်ရမှာကနာမည်တစ်ခုတည်းပါ။ ဒီဟာအရမ်းစျေးကြီးမနေဘူးလား?
Kaname စနစ်ကကောင်းတယ်၊ မကောင်းဘူးလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်စျေးက ယခုခေတ်အချိန်နဲ့မသင့်တော်ပါဘူး။၎င်းစနစ်သည် ရှေးဂျပန်ပုံစံနှင့်အညီဖြစ်သောကြောင့် ယင်းစနစ်ကိုတည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှေးခေတ်ကမြို့တော်ခန်းမရှိ ၎င်းသည်မွေးဖွားခြင်းနှင့် သေခြင်းအကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ထားသောအရာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကိုဒေသန္တရဘုရားရှိခိုးကျောင်းတစ်ခုတွင်မှတ်ပုံတင်ထားပြီး လူအများအပြားက သူတို့၏ဘ ၀ တစ်ခုလုံးကို ဒေသအတွင်းတွင်နေထိုင်ခဲ့ကြရာ ဝတ်ပြုရာအိမ်တော်နှင့် ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗိမာန်တော်၏ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးသည် သေဆုံးသွားသူတို့ကို ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ ထို့ကြောင့် နာမတော်ကိုမှန်ကန်စွာစဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်ခဲ့ပြီး ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့်လူများအကြားအကွာအဝေးမှာလည်း အလွန်နီးကပ်လှသောကြောင့် အလှူငွေများကိုလည်းဘုရားကျောင်း၌စုဆောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။
ယခုခေတ်မှာတော့ လူများဟာတစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့ ပိုမိုရွေ့လျားလာနေသောခေတ်တွင် ဘုရားကျောင်းများနှင့်လူများကြားရှိ ဆက်ဆံရေးသည် အားနည်းလာပြီး အလှူငွေများကိုလည်း ယခင်လောက် မစုဆောင်းနိုင်တော့ပါဘူး။အဲဒါနှင့်ပတ်သက်လာရင် အသုဘအခမ်းအနားမှသာ ဝင်ငွေရဖို့ပဲရှိပါတယ်။ထို့ကြောင့် လက်ရှိပြဿနာမှာ ငွေပမာဏမြင့်တက်နေတာလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဘုရားကျောင်းတွေမှာလည်း အလှူငွေရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာနားလည်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒါကသံသရာလည်နေတယ်။ထို့အပြင် သင်္ချိုင်းဟာလည်း ကြီးမားတဲ့ပြဿနာဖြစ်လာပါတယ်။ဂျပန်သင်္ချိုင်းဟာဆိုရင် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏သင်္ချိုင်းများမဟုတ်ပါဘူး။ဖခင်၊ အမေနှင့်သူတို့၏ဘိုးဘေးများပင် မိသားစုတစ်စုလုံးက သင်္ချိုင်းတစ်ခုတည်းပါ။သက်ရှိလူများက သူတို့၏သင်္ချိုင်းများကို သူတို့၏ဘိုးဘေးများကိုအောက်မေ့သည့်အနေဖြင့် ကာကွယ်ပြီး စောင့်ရှောက်ထားကြပါတယ်။
မွေးရပ်မြေမှထွက်ခွာလာသူအရေအတွက်တိုးများလာသည်နှင့်အမျှ ဆွေမျိုးများနှင့်ဆက်ဆံမှုမှာလည်းအားနည်းလာပြီး မိသားစုတစ်ခုစီက လက်ရှိမိသားစုကိုပိုမို ဦး စားပေးလာကြပါတယ်။နေရာအသစ်တစ်ခုဝယ်ဖို့ငါကြိုးစားတဲ့အခါ မှာလည်း ဒီသင်္ချိုင်းကစျေးကြီးပါတယ်။တိုကျိုမြို့အနီးကဆိုရင် ယန်း ၃ သန်းလောက်ရှိလောက်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့ အသုဘအပါအ၀င် ယန်း ၅ သန်းရှိပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံ၏လက်ရှိအခြေအနေမှာ သေဆုံးရန်ယန်း ၁၀ သန်းခန့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်နေသလိုပါပဲ။ ဆေးရုံစရိတ်ကိုလည်းစဉ်းစားရအုံးမှာပါ။စီးပွားရေးပိုမိုဆိုးရွားလာသည့်ဂျပန်မှာ ဤပမာဏကိုပေးရန်ခက်ခဲပါတယ်။အိမ်များတိုးများလာပြီး အသုဘအခမ်းအနားများနှင့်သင်္ချိုင်းများတွင် အရိုးအိုးများထားမည့်အစား၊ သင်္ချိုင်းများဝယ်ရန်ငွေများမှာစျေးကြီးသောကြောင့် အိမ်တွင်ပင် အရိုးအိုးများကိုသိုလှောင်ကာ စောင့်ရှောက်ထားကြပါတယ်။အရိုးအိုးလေးသန်းလောက်က ဂျပန်အိမ်များတွင် အိပ်ပျော်နေကြတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။
သူ့မိဘရဲ့အမှူကိုကြည့်ရင်းဝမ်းနည်းနေတဲ့လူတစ်ယောက်အတွက် အတော်လေးကိုစိတ်မကောင်းပါဘူး။အမျိုးမျိုးသော၀န်ဆောင်မှုအသစ်များက ထိုသို့သောလူများကိုကယ်တင်ရန်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့် ထိုကဲ့သို့သောဝန်ဆောင်မှု။
၎င်းသည် သော့ခတ်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ကောင်းမွန်အဆင်ပြေသောနေရာတွင် တည်ရှိပါတယ်။အမြဲလာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒီအမျိုးအစားဟာ ယန်း ၂၀၀,၀၀၀ ခန့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာသင်္ချိုင်းကိုဝယ်ခြင်းထက် ကျိန်းသေစျေးနှုန်းချိုသာပါတယ်။ထို့အပြင်အများပိုင်သင်္ချိုင်း၏စိတ်ကူးပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။လူအများတို့၏အရိုးများကို သင်္ချိုင်းဂူကြီးတစ်ခုထဲတွင်မြှုပ်နှံတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာကတော့ စျေးသက်သက်သာသာနဲ့ယန်း ၁၀,၀၀၀ ကုန်ကျတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ကိုယ်မြတ်နိုးရတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတော့ သေသွားတဲ့အခါ ကျကျနန သင်္ချိုင်းဂူထဲမှာထားချင်တယ်ဆိုတာနားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျဆင်းနေတဲ့ဂျပန်စီးပွားရေးမှာ အဲဒါကအိပ်မက်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်လာပါတယ်။ထို့နောက် အနည်းဆုံးတော့ သူတို့ကို အိမ်၌စီမံခန့်ခွဲကာစောင့်ရှောက်ထားခြင်းထက် အများပိုင်သင်္ချိုင်းတွင် မှန်ကန်စွာထားရှိစောင့်ရှောက်ခြင်းကပိုကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဤအချိန်မှာတော့ ရှေးဟောင်းပုံစံစတိုင်များနှင့်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများဟာ ပျောက်ဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အနည်းငယ်အထီးကျန်တယ်လို့ခံစားရပေမယ့် ဒီလိုသင်္ချိုင်းပုံစံကိုရော ခင်ဗျားဘယ်လိုထင်သလဲ။
စကားမစပ် အမေကအသက် ၇၇ နှစ်ရှိပါပြီ။ကျွန်တော့်အဖေနဲ့အဖွားတို့ရဲ့သင်္ချိုင်းတစ်ခုရှိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်သွားရင် ကားနဲ့တစ်နာရီတောင်မကြာပါဘူး။သို့ပေမယ့် ရထားများနှင့်ဘတ်စ်ကားများကိုပြောင်းလဲလိုက်ပါက သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်အဆင်မပြေဖြစ်ပြီး တစ်နာရီစာက သုံးနာရီကျော်ကြာလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကားမောင်းနိုင်နေစဉ်တော့ကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ပိုပြီးအန္တရာယ်များလာပါတယ်။ထိုအခါသင်ဟာ သင်္ချိုင်းသို့မသွားနိုင်တာတွေ ရှိလာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်ုပ်တို့၏ သင်္ချိုင်းကို ရွှေ့ပြောင်းသင့်မသင့်ကို အလေးအနက်စဉ်းစားရမည့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်မှာက သေဖို့အတွက်လည်း ပိုက်ဆံကုန်ကျများပါတယ်။
အနာဂတ်မှာတော့ ဤယဉ်ကျေးမှုက မည်သို့ပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတာ မပြောနိုင်သေးပါဘူး။
ပြီးတော့ ဒီဟာက သင့်ရဲ့တိုင်းပြည်မှာလည်း ဒီလိုပြဿနာရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဂျပန်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို ဂရုပြုကြပါ။